Hamro Yatra | » नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीतिमा के के छन् व्यवस्था ? नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीतिमा के के छन् व्यवस्था ? – Hamro Yatra
> नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीतिमा के के छन् व्यवस्था ?
नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीतिमा के के छन् व्यवस्था ?
१५ फागुन, काठमाडौँ । हवाई प्रविधिको विश्वव्यापी आयाम र बदलिँदो परिवेशअनुरूप नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले करिब डेढ दशकपछि नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति बनाएको छ ।